Induction Brazing Carbide Tipping on Goynta Codsiyada Qalabka Birta
Soo saaraha hormuudka u ah qalabka wax lagu gooyo ee CBN iyo PCD ayaa doonaya inuu kordhiyo wax soo saarkooda Xoogga saaring kulaylka on aag aad u yar si ay u hoos u dhig kuleylka iyo hagaajinta a carbide tipping geedi socodka.
Habka Indhaynta Indhaha:
Macaamiilku wuxuu bixiyay jir bir saddex-xagal ah, dhinac walba ~ 16.5 mm (0.65 inji). The Indho-indheynta carbide tigid waa in lagu sameeyaa 3 mm (0.11 inji) isle'eg saddexagalka geeskiisa. Aagga kululaynta ee jirka birta aaladda waa 43 mm (1.69 inji) OD x 25 mm (0.98 inji) dherer. DW-UHF-6kW-II nidaamka kuleylinta kuleylka ayaa loo adeegsaday si loo gaaro 1600 ° F (870 ° C) oo lagu dhameystiro nidaamka 8 ilbidhiqsi. Qalab si gaar ah loo qaabeeyey ayaa ku urursaday kuleylka aagga carbide-ka iyo yareynta waqtiga wareegga.
Qalabka Indhaha ee Induction:
DW-UHF-6kW-II nidaamka kuleylinta kuleylka ee la habeeyay isku-duubista bir-qabashada waxaa loo isticmaalay in lagu waafajiyo shuruudaha nidaamka.
Warshadaha: Tools & Qalabka
Categories Technologies Tags adkeysi, carbide burco, Xaraashka Carbide Tabaha, qalab jarista xaraashka carbide, indha indheynta gooynta, qalabka jarista qalabka, hf indho sarcaad, brazing induction, Induction Brazing Carbide Tabaha, birta goynta indha indheynta, Qalabka jarista indha indheynta Post navigation